Global Voices teny Malagasy » Fivahinianana iray ho an’ny feon’ireo tsy mba re amin’ny fananganana indray an’i Haiti · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Oktobra 2010 8:23 GMT 1	 · Mpanoratra Eleonora Pantò Nandika (en) i Bernardo Parrella, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Karaiba, Haiti, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Mpitsoa-ponenana, Sarimihetsika, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Giordano Cossu avy any Italie sy Benoit Cassegrain avy any France dia samy « web reporters » namorona ny Solidar'IT any Haiti , tetikasa anaty tranonkala niforona tamin’ny alalan’ny fikasana hanao ny Paris Crisis Camp  mba hampiasana aterineto sy ireo teknolojia hafa hanampiana ireo Haitiana niharan’ny horohoron-tany tamin’ny volana Janoary lasa teo .
Mandra-pahavitan’ilay fanadihadiana an-tranonkala amin’ny faran’ny taona, ity tranonkala multimedia ity  no hahitana ireo karazana multimedia amin’ny teny anglisy sy teny frantsay :
25 taona izao i Marie Sofonie ary vonona hamaky ny fahanginana mikasika ireo fanararaotana. Mpandray anjara mavitrika amin’ny tetikasa AYITI SMS SOS izy ; izay mamela ireo niharan’ny fanararaotana handefa SMS mankany amin’ny laharana maitso (38030303). Hita eo amin’ny sarintany ny niavin’ny antso ary voatsinjara araka ny karazana heloka na fiantsoana vonjy, toerana, sns- amin’ny alalan’ny fampiasana rindrankajy Ushahidi  sy Frontline SMS . Ny AYITI SMS SOS dia tohanan’ny Survu Connect, fikambanana mifandray akaiky amin’ny Fondation Espoir 
Ralph dia tanora haitianina mpanao gazety ao amin’ny “ a camp per day”, fandaharana amin’ny onjam-peo izay maharitra 20 minitra ary mitondra ny anarana hoe ENDK (“Enfomasyon nou dwe konnen”, midika hoe “vaovao ilaina”), vokarin’ny fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana Internews . Mandeha mitety ireo toby izy  isan’andro, ary miresaka amin’ireo olona mba hahafahana mamantatra ny tena olana goavana sedrain’izy ireo. Ny tatitra ataony dia maneho avy hatrany ny zavatra tsapa sy hita ary koa ny filàn’ireo olona miaina ao anaty toby, ary hahazoana vaovao any amin’ireo toby hafa. ENDK dia fandaharana isan’andro alefa amin’ny tambajotra-na onjam-peo miisa 35 any Haiti. Ny tantaran’i Ralph dia feo hafa nalaina ary nalefa eo amin’ny tranonkala amin’ny alalan’i SOLIDAR’IT ao amin’ny Haiti Documentary.
Misy tantara hafa koa ao anatin’ny tetikasa-na tranokala toy ny mikasika ny Onjam-peo Boukman,  fikambanan’ny onjam-peo ao Cité Soleil, fokontany mampitahotra ao Port-au-Prince, izay mandrindra ny fampandrenesana mikasika ny rivodoza izay tsy misy fanohanana iraisam-pirenena. Ary misy koa ny The Koute Ayiti (Listen to Haiti) caravan  noforonina hitety ireo faritany voakasiky ny horohoron-tany ary vaovao mikasika ny fahasalamana sy vaovao iankinan’ny aina mba ho enti-manohana ny fanarenana.
Onjam-peo Boukman, feon’ny ireo tsy mahazo miteny ao Cité Soleil : avy amin'ny Web-Reporter  ao amin'ny Vimeo .
Raha te-hahafantatra misimisy kokoa mikasika ny tetikasa Solidar'IT in Haiti dia afaka mitsidika ny tranonkala /bilaogy,  takelaka Facebook  na fahana Twitter . Raha hanome fanampiana avy hatrany, afaka mampiasa ny Ulule , sehatry ho fanangonam-bola.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/23/10177/
 Solidar'IT any Haiti: http://solidar-it.net/en
 Paris Crisis Camp: http://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_camp
 horohoron-tany tamin’ny volana Janoary lasa teo : https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/haiti-earthquake-2010/
 vatan’ny fangirifiriana : http://solidar-it.net/en/2010/08/femmes-temoignages-anonymes-tres-douloureux-vie-dans-les-camps-d%E2%80%99haiti/
 AYITI SMS SOS : http://survivorsconnect.org/haitismshelpline/page/index/3?l=fr_FR
 Mandeha mitety ireo toby izy : http://solidar-it.net/en/2010/08/english-the-reporter-life-camps/
 Onjam-peo Boukman,: http://solidar-it.net/en/2010/09/la-radio-de-cite-soleil-previent-des-cyclones/
 The Koute Ayiti (Listen to Haiti) caravan: http://solidar-it.net/en/2010/08/karavan-du-rire-de-la-prevention/
 fikambanan’ny tanora tsy miankina FNJD : http://www.fnjd.org
 fahana Twitter: http://twitter.com/SolidarIT_eng